ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၁-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၃၁-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ဒီပဲယင်း ၁ဝ နှစ်မြောက် အခမ်းအနား ဒီပဲယင်းမှာ ကျင်းပ click
- ၁၀ နှစ်ပြည့် ဒီပဲယင်း အမှုမှန် ပေါ်စေချင် click
- ကချင်ဆွေးနွေးပွဲ လုံးဝအပစ်ရပ်ရေး သဘောတူညီချက်မရဘဲ ပြီးဆုံး click
- အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ၇ ချက် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး click
- အစိုးရနဲ့ KIO သဘောတူညီချက် (ရုပ်သံ) click
- ကချင်ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ် (ရုပ်သံ) click
- မြစ်ကြီးနား ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်က ပုံစံသစ်ဖြစ် click
- ကချင်အရေး သဘောတူညီချက်တွေက ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစလား click
- တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း တိုက်တွန်း click
- အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပွဲက နောက်ထပ် အလုပ်သမားနှစ်ဦး ဆေးရုံတင်ရ click
- ကိုထင်ကျော်ရဲ့ အမှုအခြေအနေ (ရုပ်သံ) click
- ကိုထင်ကျော်ကို တရားရုံက ပြန်လွှတ်ပေး click
- လားရှိုးမြို့အခြေအနေ ပြန်လည် တည်ငြိမ် click
- လားရှိုးအခြေအနေ တည်ငြိမ်စပြု (ရုပ်သံ) click
- မေလ ၂၈ ရက် ညနေ - မေလ ၂၉ ရက် မနက် လားရှိုးမြို့ မြင်ကွင်း (ရုပ်သံ) click
- လားရှိုးဒုက္ခသည်တွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ခိုလှုံနေ click
- သားသမီး အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက် ကုလ ဆန့်ကျင် click
- မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု တရားရုံးကို ရောက်ရှိမှု နည်းပါး click
- ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် ၂ ဦး ဆန်ဖရန်လေဆိပ်ကုို ဆိုက်ရောက်၊ ဇွန် ၁ မှာ လူထုနဲ့ တွေ့မည် click
- ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (သုံးသပ်ချက်) click
- ဗမာပြည်အတွက် ဆဋ္ဌမမြောက် ဒုလ္လဘတရား (ဆောင်းပါး) click
- လျှပ်စစ်နှင့် လောင်စာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တရုတ်ပြည် နမူနာယူနေသော မြန်မာ (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာ့စီးပွားရေး အနှစ် ၂၀ မှာ လေးဆ တိုးနိုင် click
- မြန်မာ့စီးပွားရေးပမာဏ ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀၀ အထိ တိုးလာဖွယ်ရှိ click
- နေပြည်တော်က အဆင့်မြင့်လယ်ယာ (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်မယ့် ဆီးဂိမ်းစီစဉ်ပုံကို ဖိလစ်ပိုင်က မကျေနပ် click
- ကိုမျိုး၊ မင်းကျော်ခိုင်၊ မိုးမခ၀ိုင်းတော်သားများ၊ ချစ်သူများအတွက် လက်ဆောင် click
- ဒေါ်မာမာအေး၏ သီချင်းစီဒီ မိုးမခ Amazon MP3 တွင် အွန်လိုင်းမှ ရယူနိုင်ပြီ click
- နီယိုမော်ဒန် မြန်မာကဗျာ (ဘလော့) click
- ဘက်စုံထူးချွန်သော ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဘဂျမ်း (ဆောင်းပါး) click
- ၀မ်းတွင်းရူးတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ တုိုင်းပြည် (ကာတွန်း) click
- မပြီးဆုံးသေးသော ပန်းချီကား (ကာတွန်း) click
- သူမသာ၊ ကိုယ်အသုဘ ဆိုပါလား (ကာတွန်း) click
- ရုရှားက ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည် ရပြီလားဆိုတာ အာဆတ် ပြောမသွား click
- ပြင်သစ်သမ္မတ ဧည့်ခံပွဲသုံး ၀ိုင်အရက်တွေ ထုတ်ရောင်းမယ် click
- ပြန်ပို့ခံရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ဒုက္ခသည်များ အခြေအနေ HRW စိုးရိမ် click
- အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း အပူလှိုင်း လူ ၅၀၀ ကျော်သေ click
- ခမာနီခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဝန်ချ တောင်းပန် click
- လူသတ် စက်ရုပ်လက်နက်အရေး လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ကြားနာ click
- ကမ္ဘာ့ဆေးလိပ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (ရုပ်သံ) click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:00 PM
ကျောင်းတွေက ဖွင့်တော့မယ် ဆရာဆရာမ အပြောင်း
အရွှေ့ က ဘာမှမထူးသေးပါလား။
သက်ဆိုင်ရာ TEO တွေက တန်းစီဇယားနဲ့ တင်ပေးလိုက်
တယ် မူဘောင်ညီညွှတ်တယ်ဆိုရင် Order ထုတ်သင့်ပြီ
မျက်နှာစိမ်းစိမ်း ကျက်ကျက် ပေတံ တခုနဲ့ ပဲတိုင်းပြီး
နေပါအုန်း ၊ soe oo .. ရ ။
ပြောင်းချင်တဲ. ဆရာမ က ဘယ်မြို.နယ် လိုချင်တာလဲ ၊ ရန်ကုန်မြို.တွင်း နေရာကောင်းနဲ. TTC ဆိုရင် ၁၀ သိန်းကျော်
လှိုင် ၊အင်းစိန် ၊မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကင်း လောက်ဆိုရင်
၅ သိန်း ဘဲ ၊
ပွဲစားရှာပြီး Join လေ ငါ.ကောင် ရ ။
အဲဒါဆိုရင် သန့် ရှင်းသော***ကောင်းမွန်သော*** ဆိုပြီးရွတ်နေတာ
TTC ၁၀ သိန်းနဲ့ဆိုရင် ဘက်ဂရောင်းလူကြီးတစ်ယောက် ယောက်က ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ရာပိုင်ရာ ထောက်ခံစာလေးဘာလေး ပါမှရမယ်၊
ဘာမှ မပါဘဲ အလွတ်ကြီးဆိုရင် သိန်းရာဂဏန်းမှရမယ် ကိုယ့်လူ..
တစ်နှစ်လောက်ဆို အရင်းကောင်းကောင်းကျေ ဆိုပဲ..
အဲဒီလောက်တောင် ဈေးပေါက်နေတာလား ၊
Pili Thwun ရာ .......
သိန်း ရာဂဏန်း ? ? ?
သွပ် ၊ သွပ် ၊ သွပ်